Olee otú Hichapụ kalenda si iPhone
iPhone Data nchicha
1 iPhone Hichapụ
Hichapụ iPhone Photos
Hichapụ Chakwasa ihie akụkọ ihe mere eme
Hichapụ oku History
Hichapụ Text Ndi ana-akpo
Hichapụ iPhone Data
Hichapụ iPhone History
Hichapụ iPhone Ozi
Hichapụ iPhone Ibe edokwubara
Hichapụ iPhone Podcast
Hichapụ iPhone Ndi ana-akpo
Hichapụ iPhone-adịbeghị anya
Hichapụ iPhone Ndị ọzọ
Hichapụ iPhone Kuki
Hichapụ iPhone kalenda
Hichapụ Igwefoto Roll
Hichapụ iPhone égwu
Wepụ iPhone Data
2 iPad Nhichapụ
Hichapụ iPad email
Ihichapu iPad nke na-ere
Hichapụ iPad Data
Hichapụ iPad égwu
iPhone nhicha égwu
Ọcha App Data
Ọcha iPhone Nchekwa
Doro Anya iPhone History
Doro Anya iPhone Nchọgharị History
Doro Anya iPhone Cache
Doro Anya iPhone Space
Doro Anya iPhone Data
Na-adịgide adịgide Doro Anya iPhone
4 iPhone ihichapu
Ihichapu Jailbreak iPhone
Ihichapu iPhone 6S
Ihichapu iPhone ọdịnaya
Ihichapu iPhone History
Hichapụ iPhone tupu ere
Ihichapu iPhone Permanenly
5 Ndị ọzọ
Format iPhone Zuru
Adị n'elu iOS
Belata iPhone Photo Size
Factory Tọgharia iPhone
Tọgharịa Jailbreak iPhone
Free Up Document Data
On iPhone na ndị ọzọ na iOS ngwaọrụ, ọbụna mgbe a na-echetara ma ọ bụ na kalenda mechaa, ntinye ka na-anọgide na ekwentị gị. Iji mara otú ka ihichapụ ha, na-agụ isiokwu a na-eso nzọụkwụ dị ka e n'okpuru.
Nzọụkwụ 1: Mepee kalenda ngwa si n'ụlọ gị na ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Kpatụ kalenda na ala nke na ngwa.
Nzọụkwụ 3: Ugbu a enweta na 'Dezie' na n'elu aka ekpe nke ngwa.
Nzọụkwụ 4: Họrọ kalenda ị chọrọ ka ihichapụ site na ndepụta nke kalenda.
Nzọụkwụ 5: Kpatụ 'Nhichapụ' na bọtịnụ ka ihichapụ họrọ kalenda.
Nzọụkwụ 6: Kwenye site na ịme ọpịpị 'Hichapụ Kalinda' site mmapụta elu.
Olee otú ihichapụ kpam kpam ehichapụ kalenda si iPhone
Ọbụna mgbe ihichapụ a kalenda ntinye si gị iPhone, ntinye bụ n'ụzọ zuru ezu ehichapụ n'ihi na ọ nwere ike hụrụ ma ọ bụ natara na enyemaka nke ụfọdụ data mgbake software. Ụzọ kasị mma ihichapụ kpam kpam kalenda si iPhone bụ site na iji Wondershare SafeEraser, ndị kasị mma data nhichapụ software e nwere.
Mgbe ihichapụ onwe data gị iPhone dị ka ozi, oku na ndekọ, wdg data bụ n'ụzọ zuru ezu ehichapụ gị iPhone na ike ka a natara iji ụfọdụ software ma ọ bụ ngwaọrụ. Iji na-adịgide adịgide ihichapu data gị iPhone-enweghị ohere nke na-agbake ya, ị mkpa iji Wondershare SafeEraser. Wondershare SafeEraser bụ ngwá ọrụ ihichapu ma gị onwe na-ehichapụ data gị iPhone. Ọ bụ ihe kasị mma software ihichapu onye data dị ka ozi, oku na ndekọ, wdg ma ọ bụ ekwentị gị ka a dum. Wondershare SafeEraser akwado data na ngwaọrụ gị dị ka ozi kọntaktsị, foto, videos, ngwa ọdịnala, akaụntụ Ama, okwuntughe na onwe onye ndị ọzọ data ịchekwa na gị iPhone. Ụzọ e mere ya, ọ dịghị ekwe omume nke na-agbake ehichapu data site na iji ụdị ọ bụla nke software mgbe iji Wondershare SafeEraser ihichapu ekwentị gị data. N'agbanyeghị otú ike onye na-agba mbọ ma ọ bụ nke na-eji software, na-agbake data ehichapu site Wondershare SafeEraser bụ na-esote agaghị ekwe omume.
Mfe ma dị mfe iji interface: nnọọ mfe onye ọrụ interfaces.
Adị n'elu ngwaọrụ gị: Hichapụ junks na adị ngwaọrụ gị maka kasị ukwuu arụmọrụ.
Kpamkpam ihichapu ozi: Data ehichapu na-ruo mgbe ebighị ebi gara na ike mgbe-natara.
Na-akwado ọ bụla onye ọrụ data: égwu, ozi, foto, videos, kọntaktị, ozi akaụntụ, okwuntughe, wdg
Best Data Nchedo: Cheb'obi gị onye faịlụ.
Foto dị Compressor: Nye ngwaọrụ gị na ndị ọzọ ohere na na-na àgwà nke foto.
Fast erasing Speed: Unu ga-echere ruo ogologo oge n'ihi na data ga ehichapu ya.
Olee otú iji Wondershare SafeEraser ka ihichapụ ehichapụ kalenda on iPhone
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye Wondershare SafeEraser.
Nzọụkwụ 2: Jikọọ iPhone na-amalite Wondershare SafeEraser ngwa.
Nzọụkwụ 3: ihichapu ehichapụ faịlụ, pịa na "ihichapu ehichapụ faịlụ" nhọrọ n'etiti ndị ọzọ na isi SafeEraser window.
Nzọụkwụ 4: Chere maka Wondershare SafeEraser na-akpaghị aka nyochaa na ike iṅomi na-ehichapụ data na ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 5: Mgbe scanning zuru ezu, gị ehichapụ data ga-edepụtara kwupụta aka ekpe n'akụkụ nke SafeEraser window site na ige. Ihichapu kalenda gị, ego kalenda igbe nyere na n'aka ekpe nke SafeEraser window na pịa 'Ihichapu Ugbu a' button na ala nke window ihichapụ kpam kpam na kalenda gị. Ihichapu ọzọ ehichapụ data, nanị ego igbe ọzọ na data ị chọrọ ihichapu na see ihichapu bọtịnụ na bọtịnụ.
Nzọụkwụ 6: Ị ga-kpaliri pịnye okwu "Hichapụ" ihichapụ kpam kpam họrọ data gị iPhone na-esonụ window. Pịnye ihichapụ ma pịa "Ihichapu Ugbu a" bọtịnụ ka ihichapụ na-adịgide adịgide na ihichapu kalenda gị. Nke a dị mkpa dị ka SafeEraser chọrọ ka ị n'ezie gosi na ị chọrọ ka ihichapụ data ebe ọ na-apụghị natara e mesịa.
Mgbe kalenda e ehichapụ, ị ga-a "merie ehichapụ" ozi dị ka hụrụ na foto n'okpuru.
Na ọ bụ; i na-adịgide adịgide ehichapu kalenda gị si gị iPhone iji Wondershare SafeEraser.
Ndabere Blackberry Ozi
Ndabere Android Ozi
Olee otú Ihichapu iPhone History
Full Guide to Kọwaa ekwentị gị
5 Nzọụkwụ ihichapu Cache, Kuki, na History na android ekwentị
Olee otú ị na ichicha ihe iPhone-adịgide adịgide?
Olee otú Hichapụ History na iPhone
Ụzọ ka ihichapụ duplicated faịlụ na Windows na Mac
Mfe ụzọ iji Hichapụ Songs on iOS 7
Esi ọcha Up a ngwa ngwa Ịrụ Computer
> Resource> Ihichapu> Olee otú iji Hichapụ kalenda si iPhone